UkuJongwa kweXesha leXesha likaRihanna Sibonwa njengento engenakwenzeka
Amaxesha ama-8 I-NANCY IXESHA UkuKhangela iiNjongo zeNwele kunye nokujonga kwakhe okuSi-low
Wbonke bayazi ubuhle be-Bajan bungaphezulu; Iinwele zakhe zongeziwe, izikhonkwane zakhe zongeziwe kwaye unobangela wokuphuma kwakhe uyinto eyongezelelweyo! Kukho meme ethi Yonke into ikhangeleka ngathi ayonwabanga kude kube URobyn Rihanna Uninzi ndiyanxiba ” kwaye singabokuqala ukwamkela ukuba le yivangeli.
Isifundo senziwe ixeshana emva kwexesha sabonisa ukuba iRihanna yeyona ndawo imthengise kakhulu emhlabeni. RiRi inokuguqula ibhegi yesikhombisi ibe yongezalelo yefashoni kwaye umhlaba ulandele ngokufanelekileyo. Eyona superstar ithatha ingozi yomngcipheko wesart kwaye oku ungakubona kwisitayile sakhe esinomtsalane esitratweni. Ngokungafaniyo uninzi lwabalingane bakhe, ukuthatha kukaRihanna kwisitayela sokuhlaziyeka kunye nokubeka umva kukwelinye inqanaba. Unokumfumana ezemidlalo ngaphezu kweengubo eziphezulu zokubila kwi-denim okanye isiqwenga esithile esingaqhelekanga siyile ngqo kwindawo yokubaleka. Elona candelo liqinisekileyo lokuba ugqibelele kangakanani kwaye ngokungakhathali ukhupha imbonakalo nganye.
NguRihanna kuphela onokunxiba ngendlela enza ngayo kwaye angahambi ngayo kodwa ayisiyiyo kuphela indima ayidlalayo. Ukuba ubiza inkwenkwezi imboni yefashoni, uya kuba ulungile. Ukususela ngo-2014 kuye kwaphawuleka ukuba iRihanna icwangcisa iimeko ngelixa abanye belandela. Ukusuka kwisinxibo esinqunu, ukuya kwiipakethi ezinomtsalane ukuya kwiidyokhwe zomgxobho kunye nokwolula umkhondo weembaleki ngenxa yentsebenzo yakhe nePUMA, u'Gal Bad Riri 'uzimise njengophawu oluphambili lwesitayile se-millenial.
Nantsi inkangeleko yendlela yakutshanje kaRihanna ...
Ifoto yetyala: I-Instagram | I-Badgalriri
gal embi badgalriri Okufumaneka Isitayile seHollywood yosaziwayo isitayile seHollywood Abafazi abasandula ukunxiba ingonyama entabeni rihanna rihanna 2018 rihanna instagram isitayile se-rihanna URobyn Fenty Isinxibo sabafazi